Landa i-UC Browser- Free & Fast Video Downloader, News App apk yakamuva kakhulu yi-UCWeb Singapore Pte. Ltd. yamadivayisi we-android | ApkDi.com
Memes Hot and Gifs ngawe. Yabelana ngayo nabangani nge-WhatsApp kalula.
I-Browser ye-UC ikuvumela ukuthi wabelane ngama-memes ashisayo nama-gifs eqenjini labangane bakho nge-WhatsApp. Ngaphandle kwalokho, i-Browser ye-UC ikuvumela ukuthi ubasindise kwiselula yakho.
Isiphequluli se-UC sibuye sikuvumela ukuthi ulande amavidiyo owathandayo kudivayisi yakho ngejubane lombani. Akunandaba ukuthi ukuphi, i-UC Browser ikusiza ukuthi ujabulele kalula amavidiyo ahlekisayo ngaphandle kwe-inthanethi. Ungavula amavidiyo ngaso sonke isikhathi lapho ufuna ukonga i-inthanethi! 100% mahhala!
Isiphequluli se-UC sikunika amandla okusesha nokwabelana ngamavidiyo ahlekisayo, amavidiyo wesimo, amavidiyo ahamba phambili, nokunye. Kukhona futhi ukusebenza okufana nokuLanda Ngokushesha, Ukusindisa Idatha, ukusebenza kwe-Ad-block, futhi kukusiza ukufinyelela kumculo, ividiyo, imininingwane yekhilikithi enolwazi olunethezekile. Isiteshi sekhilikithi sishisa ku-UC Browser manje. Ungavakashela amasayithi amaningi ekhilikithi ukusekela iqembu lakho, futhi ubuke ukusakazwa bukhoma kwekhilikithi, futhi uhlole amaphuzu omdlalo ku-UC Browser.
★ Okunhlobonhlobo Kwezitika Nokwabelana Nabangane : Singeze isiteshi esisha sekhasi lesimo sevidiyo nezitika zakho. Kunezitikha ezinkulu nezinamatheliso ezidumile ongabelana ngazo nabangani bakho ezinkundleni zokuxhumana.
★ Ukuthuthuka kweWebhu Okuthuthukisiwe : Uhlobo lwakamuva kakhulu lusebenzisa injini yethu eyingqayizivele ye-U4 eyenzelwe ukwenza ngcono kwe-20% ekuxhumeni kwewebhu, ukusekelwa okujwayelekile, okuhlangenwe nakho kokubuka ividiyo, ukuphepha kolwazi lomuntu siqu, ukuqina, kanye nokuphatha isitoreji ngokuqhathaniswa nenguqulo yethu yokugcina.
★ Imodi Yewindows Emincane: Imodi yethu encane yamawindi inika amandla iwindi levidiyo ukuthi lihanjiswe ngaphandle kwekhasi le-webhu, futhi lilengiswe phezulu kwesikrini, ngenkathi ulindele ukuxoxa nabangani, uthenga online noma uhlanganyele kweminye imisebenzi ngaphandle ukuphazamiseka kokubukwa kwevidiyo.
★ Ukulanda okusheshayo: Amaseva ethu asheshisa futhi aqinise ukulandwa. Uma kwenzeka kunqanyulwa noma kuphazamiseka, i-UC Browser ingaqhubeka nokulanda kusuka ekuqhekekeni. Ngokusheshisa inqubo yokulanda, ikusindisa isikhathi samafayela alandekayo.
★ Isici seKhadi Lekhilikithi: Isiphequluli se-UC sengeza isici esikhethekile se-Cricket kubalandeli beCricket. Okufana kakhulu okuvuselelwa komdlalo we-Cricket bukhoma, izikolo nolwazi oluhlobene kungaseshwa kalula.
★ Ukulondolozwa Kwedatha: Isiphequluli se-UC siphoqa idatha, kusheshisa ukuzulazula futhi kukusiza ukuthi ulondoloze iningi lama-data celluar. Lapho ubhekabheka, idatha eningi ongayigcina nge-Browser ye-UC.
★ I-Ad block: Ukusebenza kwesikhangiso kuvimba izinhlobo ezahlukahlukene zezikhangiso ezithinta umuzwa wakho wokudlulisa amehlo. Kukusiza ukuthi uvakashele amakhasi e-web Ad-Free kumadivayisi wakho we-android, azisekho izikhangiso zesibhengezo se-pop-up.
★ Amavidiyo akho konke ukunambitheka: Isiphequluli se-UC sikuvumela ukuthi ubuke uchungechunge lwama-movie ne-TV. Imenyu ihlukanisa amavidiyo ngokuthanda okungafani: amahlaya, iziqeshana, amantombazane, i-anime, iziqola, noma amafilimu ezempi.
★ Imodi ye-Facebook: Lesi sici esiyingqayizivele sisheshisa i-Facebook kungakhathalekile isimo sakho senethiwekhi. UC Browser uhlala ethola indlela yokwandisa ijubane lenethiwekhi yakho.
★ Imodi Yobusuku: Shintshela kwimodi yasebusuku ku-UC Browser ukuze ufunde ngokunethezeka ebusuku.
Ukukhetha Komhleli 2018 - Isitolo sezinhlelo zokusebenza se-OPPO
IGolide Mi Award 2018 - Isitolo se-Xiaomi App
Ngosizo nempendulo, sicela uxhumane nesikhungo sethu sosizo http://url.cn/42kuL5f (vula ku-UC).
usuku lokushicilela: June 29, 2020
inguqulo yakamuva: Varies with device
izimfuneko: Android 4.0 and up